Ny vola lehibe indrindra nomerika amin'ny taona 2021. Lisitra ambony amin'ny vola nomerika amin'ny alàlan'ny tsena Oktobra 2021 amin'ny vidin'ny vidin'ny vola rehetra (fanondranana) amin'ny tsenam-bola dizitaly.
Top 10 dolara avo lenta indrindra amin'ny alàlan'ny fanangonam-bola amin'ny dolara amerikana.
Lisitry ny vola nomerika amin'ny alàlan'ny tsena Oktobra 2021
Tombola dizitaly dizitaly
Bitcoin (BITCOIN) 1 170 661 025 193 $
Ethereum (ETH) 456 764 739 320 $
Binance Coin (BNB) 79 461 911 777 $
Cardano (ADA) 70 952 309 658 $
Tether (USDT) 69 004 635 508 $
XRP (XRP) 51 667 870 356 $
Solana (SOL) 48 590 262 718 $
HEX (HEX) 46 841 734 423 $
Polkadot (POLKADOT) 42 362 945 303 $
USD Coin (USDC) 32 815 938 791 $
Ny dinika dizitaly lehibe indrindra dia ny serivisy tranokala cryptoratesxe.com mampiseho ny ambony indrindra amin'ny vola virtoaly miaraka amin'ny famoahana ambony indrindra, ny lanjan'ny vola madinika rehetra navoaka.
Ny serivisy an-tserasera "ny dinika dizitaly lehibe indrindra" dia mampiasa loharanom-baovao misokatra amin'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly ary mampiseho ny mari-pahaizana momba ny vola virtoaly lehibe indrindra amin'ny tena fotoana.
Ny dinika dizitaly lehibe dia raisina amin'ny vidin'ny vola madinika rehetra namboarin'ity dinika dizitaly ity. Ilaina ny manavaka ny lanjan'ny vola madinika iray amin'ny sandan'ny vola madinika sy ny kitapom-bolan'ny dinika dizitaly.
Tsy toy ny serivisy "Ny vola nomerika lehibe indrindra", izay mampiseho ny lanjan'ny vola madinika rehetra crypto, Ny lafo indrindra nomerika dia mampiseho ny vola lehibe indrindra amin'ny vola madinika iray.
Miovaova an-tserasera ny fanamafisana ny habetsaky ny vola virtoaly lehibe indrindra, satria ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly dia mitohy ary miova ny tahan'ny dinika dizitaly. Ny isan'ny vola very, tsy mijanona ihany ny resaka.
Ampiasao ny serivisy "lehibe indrindra crypto" amin'ny Internet sy maimaim-poana.
Lisitry ny vola virtoaly lehibe indrindra ho an'ny Oktobra 2021
Ny lisitry ny vola virtoaly lehibe indrindra ho an'ny Oktobra 2021 dia aseho amin'ny alàlan'ny fisafidianana 10 cryptos amin'ny fandaminana ny filaminana avy amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely kokoa, amin'ny filaharan'ireo fanjanahana midina.
Ny habe na lanjan'ny crypto dia atolotra dolara amin'ny fampitahana mora.
Ny salan'isa amin'ny haben'ny vola virtoaly lehibe indrindra dia atolotra ho an'ny Oktobra 2021. Ny capitalization dia arahi-maso foana amin'ny serivisy.
Tsidiho ny tranokalanay ary ampiasao ny serivisy ho an'ny ambony indrindra avo indrindra ho an'ny Oktobra 2021.
Ny vola nomerika lehibe indrindra 2021
Ny dinika dizitaly lehibe indrindra ho an'ny 2021 dia serivisy tranonkala maimaimpoana maimaim-poana izay mampiseho ny vola virtoaly lehibe indrindra ho an'ny 2021.
Ny santionan'ny cryptos lehibe dia tonga ao amin'ny 2021, saingy manombatantsika amin'ny an-tsipiriany ny telo volana farany teo amin'ny fananganana renivohitra. Ny tahan'ny sy ny famoahana ny crypto dia miova isan'andro, ary noho izany dia afaka miova isan'andro ny laharana ambony indrindra amin'ny "Ny lafo indrindra nomerika 2021".
Vola virtoaly amin'ny famoahana ambony indrindra.
Vola virtoaly miaraka amin'ny famoahana farany - ny salanay ho an'ny fanombanana ny lanjan'ny vola madinika rehetra dinika dizitaly. Ny vola madinika dia iray amin'ny sokajy mahazatra. Mazava fa azonao atao ny mandoa sy ny ampahan'ny vola madinika.
Noho izany, ny salan'isa amin'ny vola virtoaly miaraka amin'ny sanda farany farany amin'ny vola madinika rehetra na ny salan'isa ao amin'ny vola virtoaly lehibe indrindra.
Ankoatry ny haben'ny dinika dizitaly, dia ilaina ny mandinika ny isan'ny fifanakalozana any amin'ireo vola madinika ireo sy ny isan'ny mpampiasa ny crypto lehibe indrindra.
Latabatra an'ny vola virtoaly lehibe indrindra.
Latabatra an'ny vola virtoaly lehibe indrindra - mampiseho ny fika ambony indrindra amin'ny crypto lehibe indrindra.
Ao amin'ny latabatra ny crypto lehibe indrindra azonao jerena ny anaran'ny dinika dizitaly sy ny tahan'ny fifanakalozana ao amin'ny US dolara.
Rehefa manindry ny iray amin'ireo vola virtoaly lehibe indrindra eo amin'ny latabatra ianao, dia hoentina mankany amin'ilay pejy miaraka amina fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ilay olana sy ny vidin'ny ny asa rehetra an'ny vola dinika dizitaly rehetra.
Taratasy avy amin'ny vola virtoaly lehibe indrindra.
Ny tabilao dinika dizitaly lehibe indrindra dia fitaovana maimaimpoana maimaim-poana amin'ny Internet izay mampiseho ny laharana ambony indrindra amin'ny vola virtoaly lehibe indrindra.
Ny tabilao an'ny vola virtoaly lehibe indrindra dia mampiseho ny tahan'ny 10 crypto ambony indrindra amin'ny vidin'ny fandefasana ambony indrindra.